यूरोपमा रिट्ठाको माग बढ्दो, प्रति केजी ५ सय १२ यूरो ! - Shuva Bihani
यूरोपमा रिट्ठाको माग बढ्दो, प्रति केजी ५ सय १२ यूरो !
२०७६ पुष ३, बिहीबार ०७:०४ December 19, 2019 Shuva Bihani Team0
यूरोपमा रिट्ठाको माग बढ्दै गएको छ । जर्मनीमा प्रशोधित रिट्ठाको मूल्य प्रतिकेजी ५ देखि १२ युरोसम्म पर्ने गरेको जनाइन्छ । यूरोपेली देशहरुमा रिट्ठाको धूलो वासिङ मेसिनका लागि उपयुक्त हुनेगरी पाउचमा उपलब्ध गराइन्छ । रिट्ठाबाट बनेको साबुन पनि यूरोपेली बजारमा लोकप्रिय हुँदै गएको छ ।
शाकाहारी समाजले यसको प्रमाणीकरण र प्रवद्र्धनको काम गर्छन् । नेपालले पनि युरोप, अमेरिकालगायत विश्वका ११ देशमा रिट्ठा निर्यात गर्दै आएको छ । नेपालको रिट्ठाको मूल्य भारतमा प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ रहँदा युरोपमा ३८४ रुपैयाँमा निर्यात भइरहेको छ ।
भारतले पनि विश्वभर प्रतिकिलो औसत २२४ रुपैयाँमा रिट्ठा निर्यात गर्दै आएको छ । नेपाली रिट्ठा व्यवस्थित रुपमा निकासी गर्ने रणनीति अपनाएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसले विशेष स्थान पाउन सम्भावना देखिएको छ ।
‘नेपाल आइडल’ सिजन–३ आजबाट सुरू
पर्पल ‘बिकिनी’मा हट अदिति
२०७६ मंसिर १३, शुक्रबार ०७:१७ November 30, 2019 Shuva Bihani Team
२०७६ मंसिर ११, बुधबार १५:५४ November 30, 2019 Shuva Bihani Team